Owesifazane wokuqala ukuba yinhloko yonjiniyela kwaTransnet e-East London
UNGOWESIFAZANE ongene waqhakela phezulu emkhakheni wobunjiniyela Nksz Khayakazi Somzana ongowesifazane wokuqala ngqa omnyama emkhakheni akuwo echwebeni lase-East London Isithombe: SITHUNYELWE
UKUPHASA kahle izibalo nesayensi esikoleni kwamnika ithemba lokuthi ngelinye ilanga uyokwazi ukufeza amaphupho akhe, ayebukeka emakhulu ngaleso sikhathi.
UNksz Khayakazi Somzana (37) waseMtinde, eLusikisiki, uyiChief Marine Engineer Officer yesifazane yokuqala, echwebeni lakwaTransnet, e-East London.
Ukuqokwa kwakhe ngo-Ephreli uthi kufeze iphupho leminyaka futhi ucabanga ukuthi uzoba yisibonelo esihle kwindodakazi yakhe eneminyaka eyisikhombisa ngelinye ilanga.
Umsebenzi kaNksz Somzana kuleli chweba wukukhanda imishini nokuhlola izinjini uma kuzokhishwa imikhumbi emikhulu ukuqinisekisa ukuthi konke kusesimeni esikahle.
Ukubekezela iminyaka ewu-10 uthi kumbeke kuleli zinga asekulo namhlanje. “Ngakhula ngibukela kubaba uma enza imsebenzi yezandla, ngimsize uma ematasa. Ngakhula nothando lukagesi ngakhetha nezifundo zezibalo nesayensi esikoleni ngoba ngifuna ukufundela ugesi.”
Uthi waphasa kahle * -matric kodwa ngenxa yezinselelo waphoqeleka ukuthi ahlale ekhaya abhekane namasimu.
“Ngahlala isikhathi eside abazali bami bengenayo imali yokungifundisa, kwangiphoqa ukuthi ngigxile emasimini ngilekelele ekhaya. Ngokuhamba kwesikhathi ngathi ngiyokwenza uN4 kugesi, sadlula ngasechwebeni nomngani wami ngabuza ngemisebenzi eyenziwa khona. Ngenhlanhla ngazama ngathathwa, ngaqala ukufunda ngo-2002 ,” kusho yena.
Ngo-2005 waqeda waba yiMillwright eqeqeshwa ngaphakathi kwaTransnet. Sakhula isipiliyoni sakhe futhi waqhubeka nokufunda wahlomula nangomfundaze wokwenza izifundo zeMaritime, eDurban University of Technology, waze wathweswa iziqu zokuba yiMarine Engineer.
Ukhuthaze abesifazane ukuthi bangayibukeli kude eminye imisebenzi ngoba isenamathuba futhi bayashoda kakhulu emkhakheni wobunjiniyela. Ubonge nezikhulu zakwaTransnet okubalwa oMnuz Andre Breede, Aubrey Tibane, Mzukisi Nqwata noShawn Coetzer ngokumsiza aphumelele.